PCB တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း SMT ၏ PCB များမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
21-02-28 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
PCB တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း SMT ၏ PCB များမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ PCBFuture သည် SMT တပ်ဆင်ခြင်းစက်ရုံကိုတည်ဆောက်ထားပြီး၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံး 0201 အစိတ်အပိုင်းများအတွက် SMT တပ်ဆင်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် turnkey PCB assembly နှင့် pcba OEM service များကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောအပြောင်းအလဲများကိုထောက်ပံ့သည်။ ယခုငါဝင်ရောက်မည် ...
PCB / PCBA ရှိ BGA အတွက်ဒီဇိုင်းပြproblemနာများ
လုပ်ငန်းခွင်တွင်မသင့်လျော်သော PCB ဒီဇိုင်းကြောင့် PCB တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် BGA ဂဟေဆော်မှုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့်, PCBFuture အကျဉ်းချုပ်နှင့်အများအပြားဘုံဒီဇိုင်းပြproblemနာကိစ္စများတွင်မိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ငါက PCB ဒီဇိုင်နာများအတွက်အဖိုးတန်ထင်မြင်ချက်များပေးနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်! အဓိကအားဖြင့် ...
PCBA ဘုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသံဖြူ၏အရွယ်အစားအတွက်လက်ခံနိုင်သောစံ။ 1. သံဖြူ၏အချင်းသည် ၀.၁၃ မီလီမီတာထက်မကျော်လွန်ပါ။ 2. 600mm အကွာအဝေးအတွင်းအချင်း ၀.၀၅ မီလီမီတာမှ ၀.၁၃ မီလီမီတာရှိသောသံဖြူပုတီးအရေအတွက်သည် ၅ ခုထက်ပိုမပိုပါ။ 3. diamet နှင့်အတူသံဖြူပုတီးအရေအတွက် ...
အဆိုပါ PCB ပရိသထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
PCBA ဆိုသည်မှာရှင်းလင်းသော PCB အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ထည့်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ PCBA ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြီးစီးရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ယခု PCBFuture သည် PCBA ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်။ PCBA ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ...
ဖောက်သည်များစွာသည် PCBA စက်ရုံများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရွေးရမည်ကိုမသိရှိကြပါ။ PCB တပ်ဆင်သည့်စက်ရုံများများလွန်းသဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တူညီနေပုံရသည်။ သင့်လျော်သော PCBA စက်ရုံကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရှာရမည်နည်း။ သင့်လျော်သောထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော PCBA စက်ရုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အဘယ်ကြောင့် Prototype PCB ပရိသများအတွက် PCBFuture ရွေးချယ်ပါ
၁။ ခွန်အားအာမခံချက် SMT အလုပ်ရုံ - ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လျှင်အချက် ၄ သန်းထုတ်လုပ်နိုင်သောနေရာချထားသည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသော optical စစ်ဆေးရေးကိရိယာများကိုတင်သွင်းပြီးပြီ။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီသည် QC ၀ န်ထမ်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ DIP ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - လှိုင်းတံပိုး ၂ ခုရှိသည်။ ...
မည်သူသည်စက်မှုထိန်းချုပ်မှုဘုတ်များအတွက် PCB Assembly service ကိုပေးနိုင်သနည်း
PCBFuture သည် PCBA OEM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ် PCB ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ PCBA တစ်နေရာတည်းတွင်လျင်မြန်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအခြားအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည်။ ၎င်းသည်စက်မှုထိန်းချုပ်မှုပြားများအတွက် PCBA OEM ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ PCBA စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက် EMS နှင့် OEM ...
အမြန်ရှေ့ပြေးပုံစံ PCBA ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မှာယူနိုင်ပါသနည်း
PCBFuture သည်ကိုယ်ပိုင် PCB ဘုတ်အဖွဲ့စက်ရုံနှင့် SMT ချစ်ပ်စက်ရုံတို့ဖြင့် PCBA ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ PCBA သည်ဖောက်သည်များအားမြန်ဆန်စွာစစ်ဆေးနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ ယခုငါ PCBA အစာရှောင်ခြင်းစွမ်းရည်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ PCBA လျင်မြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်စွမ်း: PCBFuture တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစိတ်အပိုင်း ၁၀ ခုပါရှိသည်။
PCBFuture သည် PCBA ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းဝယ်ယူခြင်း၊ SMT ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ DIP plug-in အပြောင်းအလဲနဲ့၊ တပ်ဆင်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းစသည့် PCBA OEM ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် PCBA ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ယခု PCBA စက်ရုံများသည် ၀ ယ်ထားသောပစ္စည်းများမည်သို့သေချာကြောင်းမည်သို့မိတ်ဆက်ပေးမည်နည်း။ မူရင်းလား Com ...
ဖောက်သည်များအနေဖြင့် PCBA ဘုတ်များကိုမှာယူပြီးနောက်အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
PCBA ပေးပို့ချိန်သည်ကြိုတင်စစ်ဆင်ရေးများနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးပြီးဆုံးပြီးနောက် ၃ ရက်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ DIP အပြောင်းအလဲရှိလျှင်ပို့ဆောင်ရန် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိကြာလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အရေးပေါ်အမိန့်ရှိပါက ...
ကုမ္ပဏီများသည် SMT တပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ်ကိုမည်သို့လျှော့ချနိုင်မည်နည်း
လက်ရှိတွင်တရုတ်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများဖြစ်လာသည်။ စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရင်ဆိုင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်၊ ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်း၊ SMT သည်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းပညာ ...
အီလက်ထရောနစ်တပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုတွင် ESD ကာကွယ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်
PCB တပ်ဆင်ရေးဘုတ်များ၌တိကျသောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိပြီးအစိတ်အပိုင်းများစွာသည်ဗို့အားကိုထိခိုက်လွယ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခြေအနေများသည်၎င်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေသည်။ သို့သော်ငြိမ်လျှပ်စစ်အားဖြင့်ပျက်စီး PCBA အလုပ်လုပ်တဲ့စမ်းသပ်ကာလအတွင်းတစ်ဆင့်ချင်းစီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခက်ခဲသည်။ ...